PSG oo si xooggan ugu cadaadineysa kooxda Manchester United sidii ay kaga soo qaadan lahayd David de Gea – Gool FM
PSG oo si xooggan ugu cadaadineysa kooxda Manchester United sidii ay kaga soo qaadan lahayd David de Gea
Dajiye April 26, 2019
(Yurub) 26 Abriil 2019. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa markale ku soo laabatay xiisaheeda ku aadan xidiga kooxda Manchester United ee David de Gea, taasoo ku riixi karta inuu go’aansado ka dhaqaaqista garoonka Old Trafford suuqa xagaaga ee soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England kooxda PSG ayaa diyaar u ah inay fuliso dhamaan codsiyada goolhaayaha reer Spain David de Gea ee mushaarka todobaadlaha ah, taasoo Red Devils saareysa cadaadis xoogan.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in kooxda Paris Saint-Germain ay diyaar la tahay in miiska ay u soo saarto Manchester United dalab gaarsiisan 60 milyan oo ginni, taasoo cadaadiska ku kordhineysa United.
Manchester United ayaa ku qasbanaan doonta in laba wado midkood ay raacdo, tan koowaad oo ah inay ogolaato codsiyada ka imaanaya David de Gea ee ee mushaarka todobaadlaha ah, ama inay ogolaato inuu ku biiro kooxda PSG.
Si kastaba heshiiska David de Gea uu haatan ku joogo kooxda Man United ayaa wuxuu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Goolhayaha reer Spain ayaa doonaya in mushaharkiisa todobaadlaha ah la gaarsiiyo £ 350,000, balse saraakiisha kooxda United-ka ayaa u muuqda kuwo diidan inay sidaas dhacdo.
“Qof walba ee Real Madrid ah ayuu dilay Mourinho, xitaa Cristiano Ronaldo” – Adebayor oo dab ku shiday tababare Jose
Manchester United oo doonaysa inay la soo saxiixato difaac ka tirsan kooxda Juventus